Muungaab: Ma dhici doonto in muwaadin Soomaaliyeed xoog looga heysto Gurigiisa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muungaab: Ma dhici doonto in muwaadin Soomaaliyeed xoog looga heysto Gurigiisa
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir, Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa sheegay in garsoor cadaalad oo takhasuus u leh la horgeyn doono dacwadaha la xiriira doodah dhulka ee ku badan magaalada Muqdisho.
Jen. Muunaagab ayaa xusay in inta uu xilka hayo aysan dhici doonin in xoog lagu heysto hanti ama guri uu leeyahay muwaadin Soomaaliyeed, wuxuuna xusay in awood looga qaadi doono dadka heysta hantida dadka kale.
“Waxaan hagaaji doonaa maxkamadaha iyo sharciyada ku shaqada leh dhulalka, waxaana dhisi doonaa guddi aqoon u leh maadaama ay maxkamadaha dalka hortooda yaalaan dacwado farabadan oo dhul la isku heysto ah” ayuu Jen. Muungaab.
“Inta aan xilka hayo ma dhici doonto in xoog lagu heysto guri ama hanti kale oo uu leeyahay muwaadin Soomaaliyeed, mana socon doonto in qofkii guriga lahaa marka uu yimaado la yiraahdo sanado badan ayaan guriga kuu hayeen keen $20 kun dollar” ayuu sidoo kale yiri gudoomiyey Muungaab.
“Dadka xooga ku heysta guryaha dadka kale, waxaan teendho uga dhisi doonaa xerada Rajo2, waxaana ku qaadin doonaa qofkaas iyo carruurtiisa gaari shabaqle ah, si aan hay’adaha xuquuqda aadanuhu inoo eedeyn” ayuu sidoo kale yiri Muungaab.
“Waxaana la dagaallamaynaa dadka dukumintiyada been abuurka ah sameynaya ee dhul sharci ah ka dhigaya mid aan jirin, waxaana hiigsaneynaa in muwaadinkasta uu dareemo amni iyo cadaaladd” ayuu hadalkiisa ku daray Muungaab.
Guddoomiyaha cusub ee gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa balan qaaday in uu ka soo dhalaali doono howlaha loo igmaday, isagoo ka codsaday hay’adaha dowladda iyo shacabka inay gacan ku siiyaan gudashada waajibaadka saaran.
“Waxaan ku dadaallaynaa sugidda amniga, ka shaqeynta horumarka iyo isku xirka bulshada, teeda kale Muqdisho waxa ay hooy u ahayd isbaarooyinka bulshada lagu dhibaateynayo iyo Al-Shabaab oo dadka dhibaato kale ku haysa, waxaana iga go’aan arrimahaasi wax ka qabano” ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Benaadir.
Muungaab ayaa shalay si rasmi ah ula wareegay xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho, iyadoo xilkaas loo magacaabay 27-kii Febaraayo 2014.
Gaas oo iyo saraakiil Ingiriis ah oo ku shiray Garowe